Xidho Launcher-ga Launcher-ka Launcher-kaaga ee loo yaqaan 'Android Wear' | Androidsis
Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear: Maanta, Xidho Launcher Mini
Haddii uu jiro a codsi aan u tixgelin karno lama huraan saacadahayaga casriga ah ee nidaamka hawlgalka Android WearShaki la'aan kani waa midka aan kuusoo bandhigi doono marka xigta, waa codsi aan si bilaash ah uga soo dejisan karno Google Play Store, oo u dhaqmi doona sidii barnaamij bilow ah ama Android launcher caadiga ah.
Shaqada tan launcher for Android Wear kaas oo ka jawaabaya magaca Xiro Mini Launcher, waa cid kale oo aan ahayn inay naga siiso marin u helka howlaha ugu muhiimsan ee Android Wareable, iyo sidoo kale marin deg deg ah oo laga helo shaashad kasta oo loo maro dhammaan codsiyada lagu rakibay smartwatch-keena leh nidaamka hawlgalka Android Wear.
Muxuu noo fidiyaa Wear Mini Launcher?
Xiro Mini Launcher, wuxuu na siiyaa waxqabad aad u weyn oo ah inaan awood u leenahay inaan la macaamilno Android-keena Wareable, si la mid ah sidii aan ugu baran jirnay xarunteenna Android, waxaan ula jeedaa iyada oo loo marayo Launcher ama dalab codsi deg deg ah. Launcher ayaa loo habeeyay howlaha iyo faa'iidooyinka Android Wear, taasina waxay noqoneysaa mid ka mid ah codsiyada lagama maarmaanka u ah Android Wear iyo Android smartwatch.
Waxqabadka ugu weyn ee tani na siiso app launcher for Android Wear, waa inaad awood u yeelatid inaad si dhaqso leh oo fudud ku soo gasho, kaliya adigoo dhinac uga soo wada dhacaya shaashad ama codsi kasta oo aan ku wadno saacadeena casriga ah ee Android.
Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale na siisaa, iyadoo sameyneysa laba dhinac laba dhinac, marin u helid guddi dejin deg deg ah ama Nidaam deg deg ah kaas oo si fudud u jaleecno, waxaan kaheleynaa macluumaad toos ah xaalada batteriga qalabkeena la kaydin karo iyo waliba midka terminalka uu kuxiran yahay, taas oo ah, Smartphone-ka Android-ka ah. Waxa intaa dheer in lagu daro kontaroolada tooska ah ee mugga Taleefankayaga casriga ah, dhaqaaji ama ka jooji calaamadda Wifi, xakamee dhalaalka ama gariirka saacaddeenna casriga ah ee 'Android'.
Shaki la’aan codsi ka badan intii lagu taliyay dhammaan milkiileyaasha mid ka mid ah aaladaha cusub, kuwaas oo noqonaya kuwo mooddo leh oo u noqonaya hadiyadda xiddig ee xafladaha Kirismaska ​​ee soo socda oo durba hareeraha ka xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear: Maanta, Xidho Launcher Mini
5 fidinta Chrome si aad ula mid dhigto taleefankaaga Android ama kiniinigaaga